Yakachipa CNC yekuchinja zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Brass chiwanikwa chakaumbwa nendarira uye zinc. Icho chinhu chakanakira kugadzira CNC michina zvikamu (kusanganisira CNC kutendeuka zvikamu).
Brass CNC kutendeuka kugadzira-kunyatsoita ndarira kutendeuka zvikamu
Brass CNC kutendeuka inonyanyo shandiswa kutenderedza inotenderera workpiece netambo yekushandura. Drills, reamers, reamers, matepi, kufa uye knurling maturusi anogona zvakare kushandiswa pane iyo lathe yekuenderana inoenderana. Lathes dzinowanzotsigi- kushandiswa machine miseve, discs, maoko nezvimwe workpieces pamwe kutenderera hukawanika. Ndiwo akanyanya kushandiswa mhando yemuchina chishandiso kugadzirisa mune michina kugadzira uye kugadzirisa mafekitori.
Zvakanakira zveShanghai Ouzhan Brass Yakatendeuka Zvikamu
- Yakasimba kupfeka kuramba.
- Yakanaka ductility.
- Kuchinja-chinja uye anti-ngura, kushivirira kudiki, kunyatsoita.
-Yakanakisa tensile simba, anti-ngura.
- Kurongeka kwemuchina kwekutendeuka kwakanaka kunogona kusvika IT8, IT6, uye kumeso kwechisimba Ra kunogona kusvika 1.6 ～ 0.8μm.
OEM tsika yendarira kutendeuka sevhisi-China Shanghai Ouzhan CNC yendarira kutendeuka zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo CNC yekushandura zvikamu zvendarira zvine mhando yakatsiga uye yakavimbika inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakanaka kwendarira kutendeuka muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC inoshandura zvigadzirwa zvendarira zvakapihwa zvakanyatso kutevedzera nemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidza mutengo masevhisi endarira CNC kutendeuka zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Kushanda kwendarira kutendeuka zvikamu
Lathes dzinowanzotsigi- kushandiswa machine miseve, discs, maoko nezvimwe workpieces pamwe kutenderera hukawanika. Ndiwo akanyanya kushandiswa mhando yemuchina chishandiso kugadzirisa mune michina kugadzira uye kugadzirisa mafekitori.
Zvakanakira Ouzhan Brass Turning Service
- Zvese zvakagadziriswa CNC yakashandura zvigadzirwa zvendarira zvinoenderana nekuongororwa kwakasimba kwehunhu.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana masampuli ekugadzira zvikamu zvendarira zvakatenderera.
Pashure: CNC hwokugaya hwakabvira epurasitiki zvikamu
Zvadaro: Tsika yakakwenenzverwa yendarira kutendeuka zvikamu zvemuchina accessories
Customized zvemaziso kabhoni simbi akatendeuka chikamu ...